Kunetsekana kunoita kuti usarara - nyora matipi aya pasi! | Bezzia
Susana godoy | 08/05/2021 14:00 | Matipi ehutano
Kunetseka kunokutadzisa kurara here? Ndiwo mumwe wemibvunzo yakadzokororwa uye zvirokwazvo wakaomarara kana wasangana nemhinduro. Kune vanhu vazhinji vanoenda kunorara matambudziko akawanda anoshungurudza musoro wavo uye muhupenyu hwavo, mazuva ese.
With ichi chii zvichaitika ndezvekuti kushaya hope kunoitika nekukurumidza, kuti isu hatigone kurara kwehuwandu hwakawanda hwehusiku uye kuti tinomuka takaneta kupfuura zvakajairwa. Saka denderedzwa inogadzirwa kubva kwazviri kutonetsa kubuda. Asi hongu, zvakare ine mhinduro uye ikozvino isu tichakuudza iwe kuti ungazvibata sei. Nyora pasi aya matipi!
1 Nyora zvese zvinopfuura nemusoro wako usati warara
2 Dzidzira mabasa ekuzorodza kunze kwemba yekurara
3 Dzima nharembozha yako usati warara
4 Edza kugara uchingorara zvakafanana nguva yekurara
5 Mutambo unogara uripo muhupenyu hwako
Nyora zvese zvinopfuura nemusoro wako usati warara
Zvagara zvichitaurwa izvozvo imwe yemishonga yekurapa yaive yekugovana matambudziko. Ndokunge, kutaura navo nekuvafumura kune vamwe vanhu kana kunyangwe zvinonzwika. Asi mune ino kesi tichazviita neimwe nzira uye ndeyekuti chakanyanya kunaka chichava kunyora zvinoitika kwatiri. Hongu, sekunge raive bepanhau, asi mune ino nyaya chete nezvinonetsa. Kunyangwe ichifanira kuyeukwa kuti kana vakagadzira manzwiro ekushungurudzika uye nekuchinja rwiyo rwehupenyu, kwete chete husiku, isu tinofanirwa kuvabata nenyanzvi. Zvichakadaro, isu tichavanyorera manheru ega ega. Zvinotaridza kuti nekuvasiya vakanyorwa, isu tinokwanisa kunzwa zvirinani, kusaona matambudziko akakura kudaro uye musoro wedu unotanga maitiro ekuzorora.
Dzidzira mabasa ekuzorodza kunze kwemba yekurara
Vanhu vazhinji vanoitwa nekuita mitambo maawa vasati varara, nepo vamwe vakasununguka nekuti vanosvika vaneta. Izvi zvinoreva kuti hatisi tese tinokanganiswa zvakaenzana asi ichokwadi kuti kana kunetseka kusikurega uchirara, tinofanira sarudza dzimwe nzira dzekuzorora dzakadai sekufungisisa, kupenda kana kuverenga asi bhuku kana magazini uye kwete zvishandiso. Tichaita zvese izvi nekusiya mukamuri, kunge mweya wemhepo yakachena. Sezvo zvakanyanya zvatiri mariri uye zvishoma patinogona kurara, kunzwa kwekushushikana kuchakura. Nekudaro, pasina kumanikidza kurota uku, zvakanakisa kushandisa nguva mune chimwe chiitiko chekuzorora chatino chengetedza pfungwa dzedu.
Dzima nharembozha yako usati warara
Kwete chete pamberi, asi chinguva usati warara. Nekuti zvinonzi iwo mwenje werudzi urwu rwezvishandiso uyo unotiisa zvakanyanya kungwarira. Nekudaro, isu hatizokwanise kuzorora asi zvakapesana chaizvo. Kunyanya patinenge tato dhonza zvinonetsa kana matambudziko. Saka, edza kukanganwa nezve nharembozha yako, zorora zvakanyanya sezvinobvira uye kanganwa nezve zvese zvakakukomberedza kwemaminetsi mashoma, uchigara uchifunga kuti kurara kunobatsira kuvandudza hutano hwako, pamwe nekuzorora.
Edza kugara uchingorara zvakafanana nguva yekurara
Ichokwadi kuti hatigone kuzviita nguva dzose uye zvinonzwisisika. Asi mukati mekwanisiro, isu tinofanirwa kuzvifunga. Nekuti kana mamwe mazuva tichienda kunorara zvakanyanyisa kunonoka uye vamwe vachida kuzviita nekukurumidza, zvinozonetsa kuti muviri ujaire shanduko yakawanda. Kuti isu tinofanirwa kuseta purogiramu uye mutinhimira. Saka zvishoma nezvishoma kana nguva iyoyo yasvika, mutumbi wakagadzirira kuona kuti nguva yasvika yekugona kukotsira.
Mutambo unogara uripo muhupenyu hwako
Tisati tataura zvimwe zviitiko, asi izvozvi tinotaura nezve mutambo wacho pachawo. Mune ino kesi isu tinofanirwa kutsvaga maminetsi mashoma pazuva kuti tivagadzirire. Nekuti chaizvo tinoda kuchengetedza miviri yedu nepfungwa zvakanaka. Mutambo unotibatsira kusunungura mahormone emufaro, pamusoro pekudzikisa kushushikana uye kurwisa kunetseka. Nekudaro, kutanga kubva pane izvi, tinoziva kuti zvichatibatsira kubvisa izvo zvinonetsa zvinoita kuti tirambe tiri mukufungidzira. Zvirokwazvo zvishoma nezvishoma, tichishandisa zano rega rega, isu tichawana zororo riri nani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Matipi ehutano » Kana kushushikana kusikakutendera iwe kurara, nyora pasi aya matipi!